Zeorzia: Fitsingerenan’ny faha-roa taonan’ny Ady tao Ossetia Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2010 6:05 GMT
Vakio amin'ny teny polski, русский, Español, Português, বাংলা, English
Mifangaro voraka ireo hetsika amin'ny aterineto izay sady mifantoka amin'ny tontolo ara-jeopolitika ihany koa raha toa kosa i Zeorzia ka mankalaza ny faha-roa taonan'ny ady nifanaovany tamin'i Rosia tamin'ny volana Aogositra 2008 mikasika ny sisintanin'i Ossetia Atsimo. Mijery ny ady amin'ny fomba fijery malalaka manohana Zoerziana ohatra i Evolutsia.
[…] Maro ireo manam-pahaizana ankehitriny no miray feo, na dia tsy nanaiky ny drafitra farany natao hizoran'ny faritra aza izy ireo, fa ny ady dia vokatry ny taona 2008 irery ihany, nefa manana fototra mbola miverina lavitra be any aoriana any. Indrindra, efa taonjato maro no nandraisan'i Rosia anjara tany Kaokazy tamin'ny asa fanamboarana, ary ny manampahaizana tampom-pahalalàna dia mihevitra ny hamaritra ny fototry ny ady tamin'ny Volana Aogositra 2008 ho avy amin'ny fihanaky ny Tsarista Rosiana nandritry ny taonjato faha-18 sy faha-19.[…]
Etsy andaniny, manana ny tenin'ny Loholona Amerikana John McCain ianao, izay nanambara vao haingana tamin'ny Gazety Washington Post Op-ed fa betsaka no niova tamin'ny taona 2008, fa tsy misy na iray aza “ho amin'ny tsaratsara kokoa .”
Etsy ankilany kosa, manamaivana ny dikan'ny ady sy ireo vokatra naharitra naterany teo amin'ny lafiny jeo-politika ny mpanao politika sy manampahaizana ara-tsiansa Zeorziana, Ghia Nodia, tao amin'ny tsanganana ho an'ny tranonkala Radio Free Europe/ Radio Liberty. […] “Tsy niteraka korontana ny ady tany Zeorzia sady tsy nahatonga krizy ara-politka na ara-toe-karena akory .”
ka iza ary izany no nanana ny marina ?
[…]Ny ratsy indrindra dia very faritany vitsivitsy i Zeorzia – izay ny ankamaroan'izy ireo dia tsy azy akory aza talohan'ny ady – ary dia voadona kely ny reharehany, tsy ho resahana ny tetibidin'ny fahavoazana ara-olona sy ara-pitaovana noho ny ady. Nampiseho ireo hevi-dratsin'i Rosia mikasika ny faritra kosa, raha ny lafiny tsara, ary ny tsy fahombiazany amin'ny fanodinana an'i Zeorzia ho andevon'i Kremlin na ho fanjakana tsy nahomby.
Toeram-piambenana Rosiana , Gori, Zeorzia© Onnik Krikorian 2008
Mandritr'izany fotoana izany, any New York, Zeorziana manodidina ny 50 isa eo ho eo no manao fihetsiketsehana eo ivelan'ny Firenena Mikambana manohitra ireo izay heveriny ho fanafihana Rosiana amin'ireo faritra manodidina azy taloha , mitatitra ny Voices from Russia fa natsangana any Mosko ny fiambenana sy fitondràna labozia.
Mahatsiaro lalandava ao am-pony ny fizotr'ireo fotoan-dehibe tany Ossetia Atsimo ny tsirairay . Ny alin'ny 7 Aogositra, tao amin'ny fahitalavitra Zeorziana, nanome toky i Mikhail Saakashvili fa tsy handeha hiady izy, ary afaka ny handry fahalemana i Ossetia Atsimo. Nody ny vahoaka, ary ara-bakiteny, tao anatin'ny adiny iray, rakotry ny afo avy amin'ireo fandefasana roketa avy ao Grad i Tskhinvali. Tadidin'ny olona ny firehitry ny tanàna, raha niafina tany ambanin'ny trano ireo ankizy madinika, raha nitifitra akaiky tokoa ireo vahoaka sivily ireo fiara mifono vy. Tsy ho afaka ao an-tsain'izy ireo na oviana na oviana ireo andro ireo. […]
Na izany aza, angamba nandoko ireo sary rehetra, ireo fanehoan-kevitra roa azo iadian-kevitra, miaraka amin'ny olona mino fa nihantsy ady an'i Zeorzia i Rosia, nefa miaraka amin'ny tatitry ny Fikambanam-be Eoropeana izay manondro mazava tsara ny Filoha Zeorziana Mikhail Saakashvili ho vanja nampipoaka ny fitifirana voalohany tamin'ny volana Aogositra , milaza i Three Kings fa mitohy misy milalao ny ady an-trano ao Zeorzia.
Milaza indrindra koa ny blaogy fa , nanomboka novàn'i Saakashvili ho fandresena ara-politika ho an'ny tenany ny faharesena ara-miaramila, niaraka tamin'ny afomanga nanazava ny lanitr’ i Tbilisi, Renivohitr'i Zeorzia, mba hankalazana ny tsingerintaona .
Nanaisotra ireo fiatoana rehetra ny Filoha Jorjiana Mikheil Saakashvili ho fahatsiarovana ny hadisoana lehibe nataony nandritry ny naha-filoha azy . […]
Mampalahelo ahy ny mahita an'i Zeorzia manohy mamita-tena amin'ireto lalan-dratsy […] ary mianjera any amin'ny politikan'ny mazan-doha any Zeorzia noho ireo repoblika mpitaky fizakàntena hatramin'nynaharavan'ny Firaisana Sovietika , ny ampahan'ny lehibe indrindra amin’ ireo tsiny noho izany.
Mba fakàn-kevitra manampy tokoa ve Rosia eto ? Tsia avy hatrany. Te hanongana ny fitantànan'i Saakashvili tamin'ny taona 2008 ve izy ? Eny avy hatrany. Nijanona nanao izany ve izy ireo tamin'ny fanakànan'ny miaramila Zeorziana? Lavitr'izany . Tao anatin'ny roa andro niadiana , […] hitan'i Putin nazava tsara fa azony atao amin'ny alàlan'ny fanozongozonana ny iray amin'ireo faritra ao anatin'ny firenena ka manana toerana stratejika amin'ny Tandrefana izany, nefa mety hiteraka vokatra goavana amin'ny fibodoana manontolo sy ny fanovàna fitantànana izany .
Nolokoina ho mpanohana Rosiana ny mpanohitra ary zara raha nahalaza teny roa aza i Saakashvili mba tsy hanaovana sary an-tsaina amin'ny fomba mahatsikaiky ahitana ireo basy Rosiana mikendry ny lohan'i Zeorzia. […]
Raha atao jery todika ireo roa taona lasa, mazava tsara izao fa misy ny Zeorziana iray mpandresy tamin'ny ady tamin'ny volana Aogositra. Fa tsy ny vahoaka Zeorziana kosa aloha izany, na ny fanjakana ho avy eo. I Mikheil Saakashvili no nandresy, resy kosa i Zeorzia .
Mikhail Saakashvili tamin'ny resaka nifanaovany tamin'ny mpanao gazety, tranon'ny Filoha , Tbilisi, Zeorzia © Onnik Krikorian 2008
Nanara-maso akaiky ny fampitam-baovaon'olon-tsotra i Global Voices nandritry ny Ady tamin'ny Aogositra 2008 ary ity lahatsoratra ity dia anisan'ny fandrakofany manokana ny Tatitry ny Fifandonana any Kaokazy [Caucasus Conflict Voices].